Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani Windows 10 ngokuphelele mahhala | Izindaba zamagajethi
Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani Windows 10 ngokuphelele mahhala
I-Windows 10 ingenye yezinguqulo ezinhle kakhulu zeWindows ezisungulwe yiMicrosoft emakethe, uma siyiqhathanisa ne- ukwehluleka okukhulu kweWindows 8 neWindows Vista ngaphandle kokuqhubeka, ngoba iWindows 7 neWindows XP bezingezinye izibonelo ezinhle iMicrosoft lapho ifuna, yenza izinto kahle. IWindows 10 iyinhlanganisela yokuhamba phambili kweWindows 7 futhi ihamba phambili kwiWindows 8.x, okuthi noma kunzima ukukholwa ukuthi inezinto ezinhle.
I-Windows 10 ifike emakethe ehlobo lika-2015. Ngonyaka wayo wokuqala emakethe, iMicrosoft ivumele bonke abasebenzisi abanelayisense elisebenzayo le-Windows 7 noma le-Windows 8.x ukukhuphukela ku-Windows 10 ngokuphelele, besebenzisa ilayisense yezinombolo zalezo zinguqulo zeWindows. Kodwa lapho unyaka wokuqala udlula, kwakungasakwazi ukwenza lokho. Noma kunjalo, sikukhombisa iqhinga elincane lokukwazi landa iWindows 10 mahhala ngesiSpanish esigcwele esinelayisense yoqobo.
Yize kuliqiniso, lokho ngezikhathi ezithile iMicrosoft isinikeza ukuthi kungenzeka bhalisa ikhophi lethu le-Windows 10 usebenzisa ilayisense le-Windows 7 noma le-Windows 8.x, kufanele wazi kakhulu ukuthi ukwazi ukusebenzisa leli thuba, ngoba iMicrosoft ayilimemezeli ngenjabulo enkulu, kepha ngabasebenzisi ngokwabo abaliqondayo futhi yize bezama ukulenza lifinyelele kubasebenzisi abaningi ngangokunokwenzeka, bahlala befinyelela lapho behlose khona.
1 Kubiza malini Windows 10
1.1 Amanani we-Windows 10
2 Yini iWindows Insider
3 Ungajoyina kanjani uhlelo lwe-Insider
4 Izinzuzo zohlelo lwangaphakathi
5 Okubi kohlelo lwe-Insider
Kubiza malini Windows 10
Windows 10 yenza uchungechunge lwezinhlobo zeWindows lutholakale kithi ukumboza zonke izidingo zabasebenzisi nezinkampani, kepha lezo ezibathakazelisa kakhulu abasebenzisi yizinhlobo zeKhaya nePro. Abasebenzisi abaningi bakhetha uhlobo lwasekhaya, hhayi nje ngoba yilo ebesingakwazi ukulibuyekeza mahhala ngonyaka wokuqala, kodwa ngoba luhlanganisa zonke izidingo zasekhaya abasebenzisi.
Kepha uma ngomsebenzi wethu noma izidingo ezikhethekile, sidinga inguqulo enemisebenzi eminingi, efana ukuxhumana namakhompyutha akude, inguqulo yePro yilokho esikudingayo. Izintengo zezinguqulo zeKhaya nePro ze-Windows 10 zimi kanje.
Amanani we-Windows 10
Windows 10 Ikhaya kuthengiswa eSitolo seMicrosoft se I-145 euro.
I-Windows 10 Pro kuthengiswa eSitolo seMicrosoft se I-259 euro.
Yini iWindows Insider
Ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokukhishwa kwenguqulo yokugcina ye Windows 10 ehlobo 2015, inkampani esekwe eRedmon imemezele ukukhishwa kwefayela le- uhlelo lwe-beta lomphakathiukuze bonke abasebenzisi abanentshisekelo yokuzama izinhlobo ezintsha zeWindows bathole ithuba lokwenza kanjalo. Lolu hlelo lwe-beta lomphakathi lwe-Microsoft lubizwa ngeWindows Insider.
I-Windows Insider isivumela ukuthi sifake ngayinye yazo Windows 10 ukubheja, izinyanga ngaphambi kokuba bakhishwe enguqulweni yabo yokugcina. Lolu hlelo lusinikeza izinketho ezimbili zokusabalalisa esingazibhalisela ukuthola izibuyekezo ezintsha ngaphambi kokuba zifike emakethe kunguqulo yazo yokugcina.
Ngakolunye uhlangothi esinakho indandatho esheshayo. Le ndandatho isivumela ukuthi sijabulele ukwakhiwa okusha kwe-Windows 10 ngokushesha nje lapho sidlulisa isihlungi seMicrosoft, ngakho-ke ngumphakathi womsebenzisi okufanele ubike zonke izimbungulu abazitholayo ngenkathi besebenza. Njengoba kungeyona inguqulo epholishiwe, kungenzeka ukuthi sihlangane nenani elikhulu lezinkinga zokusebenza, ikakhulukazi uma kungukubuyekezwa okukhulu.
El indandatho ehamba kancane, iyindlela okufanele sijabulele ngayo izindaba ze-Windows 10 ngaphambi kokufika kwayo emakethe. Abasebenzisi abayingxenye yale ring bathola inguqulo epholishiwe kakhudlwana yokwakhiwa kwakamuva okutholakalayo, ngakho-ke inani lezimbungulu lincishiswe kakhulu. Konke ukwakhiwa okufika kule ndandatho, phambilini kudlule eringini elisheshayo. Manje konke kuya ngokujaha okuso ukujabulela izici ezintsha kwikhophi lakho le Windows 10.
Ungajoyina kanjani uhlelo lwe-Insider
Uma singakafaki Windows 10 ngoba asinayo ilayisense kodwa sifuna ukuzama zonke izindaba ezisiletha maqondana nezinguqulo zangaphambilini, okokuqala kufanele sivakashele iwebhusayithi yeMicrosoft esingakwazi ukuyithola landa inguqulo ye-ISO esemthethweni ukuthi sifuna ukufaka futhi dala i-USB boot ikhompyutha yethu bese uyifaka.
Ngesikhathi senqubo yokufaka, lapho ucela inombolo yelayisense, kufanele sichofoze ezansi kwalelo windi ukuthi anginayo ilayisense, ukuze yeqa inqubo futhi singaqhubeka nokufakwa eqenjini lethu. Lapho ukufakwa sekuphelile, iMicrosoft isivumela ukuthi sisebenzise yonke imisebenzi ye-Windows 10 ngaphandle komkhawulo wezinsuku ezingama-30, ngemuva kwalokho ngeke kusivumele ukufinyelela izilungiselelo ze-Windows.
Njengoba ikhophi lethu selivele lifakiwe, siya kuzinketho zokumiswa kweWindows ngokusebenzisa i-cogwheel ebekwe ohlangothini lwesobunxele lwemenyu yokuqala. Okulandelayo, chofoza ku Ukuvuselelwa Nokuvikeleka. Kukholamu yesobunxele, chofoza ku Uhlelo lwe-Windows Insider bese kukholamu yesokudla chofoza ku-Start.
Okulandelayo, iWindows 10 izosicela ukuthi sengeze i-akhawunti ye-imeyili esifuna ukuhlanganisa uhlelo lwe-Insider. Lokhu kumele kube okuvela kwaMicrosoft, kungaba @outlook, @ hotmail ... Normal is hlanganisa i-akhawunti yethu yeseshini yeWindows lapho sifuna ukusebenzisa uhlelo lwe-Insider.
Okulandelayo, kufanele sikhethe ukuthi hlobo luni lweringi esifuna ukuba yingxenye yalo. Kufanele sikhethe Ngithumele izibuyekezo zakuqala uma sifuna ukuba yingxenye ye- indandatho esheshayo (akunconyiwe) noma Uhlobo olulandelayo lweWindows, uma sifuna ukuba yingxenye ye- indandatho ehamba kancane (inketho enconyiwe).
Ekugcineni, iWindows izoqhubeka nokulanda uchungechunge lwamafayela futhi izosicela ukuthi siqale kabusha ikhompyutha. Le nqubo kungathatha isikhathi esideAkudingeki ulande amafayela kuphela, kepha futhi kufanele uwafake ngaphambi kokuqalisa kabusha iWindows, ngakho-ke bekezela.
Izinzuzo zohlelo lwangaphakathi
Inzuzo enkulu lolu hlelo ekunika yona ukuthi singajabulela zonke izindaba iMicrosoft ezosinika zona ezinguqulweni zayo ezilandelayo zeWindows. Enye inzuzo, futhi lokho okungenzeka kukuholele kule ndatshana ukuthi singakwazi sebenzisa ikhophi elisemthethweni le-Windows 10 ngaphandle kokuthi ubhalise ikhophi yeWindi noma uphoqeleke ukuthenga ilayisense.
Okubi kohlelo lwe-Insider
Njengengxenye yohlelo lwe-Windows 10 beta, ikhophi lethu lale nguqulo lizobonisa umbhalo ekhoneni elingezansi ledeskithophu nge version esiyivivinya kanye nenombolo yokwakha. Lo mbhalo uboniswa noma ngabe uyashintsha isithombe sangemuva noma cha.
Okunye okubi okukhulu esikunikezwa yilolu hlelo ukuthi singahlupheka ukungazinzi eqenjini lethu, ngoba ayiyeki ukuzama ukuba yi-beta, engadala ukuthi uma senza umsebenzi obalulekile, ingahle ichitheke uma singaqaphile futhi ngokuqhubekayo silondoloza ikhophi yalokho esikudalayo.
Uma sifuna ukusebenzisa Windows 10 ngaphandle kokungena ebhokisini, lapho sibhalisa kulolu hlelo, kumele sijoyine iringi ehamba kancane, lapho okwakhiwe osekuvele kudlulile eringini elisheshayo kufika njalo nokuthi ngaphambi kokufinyelela kulokhu amaphutha atholakele axazululiwe, ngakho-ke ukuzinza cishe kuqinisekisiwe. Futhi, isikhathi esiningi, inguqulo yezindandatho ezihamba kancane yiyo ekugcineni efinyelela kubasebenzisi bokugcina.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amakhompyutha » Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani Windows 10 ngokuphelele mahhala
Izipikha zeSonos manje sezihambisana ne-AirPlay 2